Fanafihana tetsy Andavamamba : Nisy olona roa hafa nosamborina omaly
(17-11-2017) - Olona telo izany izao no efa eo am-pelan-tanan’ny polisy, taorian’ilay fandrobana amin’ny andro antoandro izay nitranga ny alatsinainy teo, tetsy Andavamamba. Ny iray dia ilay lehilahy izay azo ny andron’iny ihany, taorian’ny fijerena ny horonan-tsarimihetsiky ny « vidéo surveillance » tao amin’ilay toerana.
Omaly indray, raha araka ny vaovao azo teo anivon’ny polisim-pirenena, dia nisy roa lahy hafa izay nosamborina. Ahiana ho nandray anjara mivantana tamin’ilay fanafihana izy ireo. Raha tsiahivina, dia amin’ny antoandro amin’ny 11 ora no nisy nanafika ny fivarotana iray, mpamongady eny Andavamamba, ilay hihazo an’Anosipatrana iny. Tsy voafaritra isa izy ireo fa tsy latsaky ny dimy kosa, raha ny filazan’ny olona. Notaterina tamin’ny gony ny vola nangalarina tao ary toa efa voafehin’ireo jiolahy tanteraka ny ora nisian’ny vola tao. Raha ny fantatra mantsy, dia vao avy nisy nanao « versement » tao amin’io toerana io. Fotoana fohy taorian’izay, dia ny jiolahy no naka izany, miampy izay vola rehetra maty hatramin’ny marain’andro.
Amin’ity tranga ity, dia azo raisina ho lesona fa manampy betsaka ny toerana izay mahasarika ny jiolahy ny fampiasana ireny « vidéo surveillance » ireny. Porofo mitohoka amin’ny tenda aloha izany voalohany indrindra, rehefa misy ny olona voasambotra. Manarak’izany, efa misy koa amin’izao fotoana ny teknolojia izay mampandre ny mpitandro ny filaminana, avy amin’ny alàlan’ny bokotra potserina fotsiny, rehefa misy ny fanafihana. Mila ampiasaina sy hararaotina ny teknolojia amin’izao vanim-potoana iainana izao na izany ho an’ny olon-tsotra na ho an’ny mpitandro ny filaminana. Heverina aza fa , tokony handeha amin’izany ny fandresen-dahatra izay ataon’ny mpitandro ny filaminana rehefa miserasera amin’ny mpivarotra na ny toerana maro mety manintona ny mpanafika.